यस्तो पनि मानवता-दुई पटकसम्म ज्युँदो व्यक्तिलाई आर्यघाट पु¥याइयो ! « News24 : Premium News Channel
यस्तो पनि मानवता-दुई पटकसम्म ज्युँदो व्यक्तिलाई आर्यघाट पु¥याइयो !
ज्याला मजदुरी गरी जिवन गुजार गर्दै आएका उनीहरु उमेर ढल्किएपछि काम गर्न सक्ने अवस्थामा थिएनन् । खरीबोट स्थित केपी डंगोलको घरमा बस्दै आएका उनीहरु मागेरै भएपनि मासिक ३ हजार घरभाडा बुझाउँदै आएका थिए । केही साता अघि मात्रै बिक्षु शौचालयमा लडेर घाइते भइन् । पिँठ्यु तथा कम्मरमा चोट लागेपछि आर्थिक अभावकै कारण उपचार गर्ने सकेन । तर कोठमा भाडामा दिएका घरबेटीले उपचारमा सहयोग गर्नुको साटो घर भित्रै म¥यो भने अशुभ हुने भन्दै उनलाई आर्यघाट पु¥याइदिएको उनको गुनासो छ ।
पुषको चिसो, त्यो पनि बागमति किनामारामा आर्यघाटको शिरेटोका कारण सिकिस्त बिरामी । श्रीमति बाँच्ने आश मारिसकेका बेलबहादुर भिख माग्दै थिए । उनको यो अवस्था देखेपछि सामाजिक अभियान्ता दुर्गानाथ दाहाल सहितको टोलीले उनको उद्धार गरेर वीर अस्पताल पु¥याए ।
वीर अस्पतालमा उनको चेकजाँचपछि अन्य अस्पतालमा रिफर गर्नु पर्ने भनियो । अभियान्ताहरुले सहयोग संकलनमा लाग्दा लाग्दै उनीहरु पुरानै घरमा फर्किए । तर फेरी पनि घरबेटीले आर्यघाटमै पु¥यादिए । दोस्रो पटक पनि उनिहरु आर्यघाटमै भेटिएपछि पुनः नवजिवन परोपकार समाजका दाहाल र अन्य युवाहरुले वीर अस्पतालमै पु¥याए ।
यो बिषयमा उनका घरभेटी केपी डंगोललाई बारम्बार सम्पर्क गर्दा पनि सम्पर्क भएन । घरबाट आर्याघाट पु¥याइएको पीडितको पिठ्यु र फोक्सोमा समस्या छ । बेलबहादुर र उनकी श्रीमतिलाई आर्यघाटबाट फर्किएर नयाँ जिवन पाइएला भन्ने आशै थिएन ।
करीब एक साता अस्पतालको उपचारपछि अहिले उनीहरु मानव कल्याण समाजको आश्रम खरीपाटी छन् । जिउँदो मान्छेलाई आर्यघाटमा पु¥याएर छोड्ने मानिस भएको यही ठाँउमा आर्यघाटबाट अस्पताल पु¥याएर नयाँ जिवन दिने व्यक्तिहरु पनि छन् ।